यी ११ खाद्यपदार्थहरुले बढाउँछ स्मरण शक्ति !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ११ खाद्यपदार्थहरुले बढाउँछ स्मरण शक्ति !!
ब्रोकोलीमा धेरै यौगिक, शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट, एन्टी–इन्फ्लेमेटरी प्रभाव र भिटामिन के हुन्छन् । जसले मस्तिष्कलाई क्षति हुनबाट बचाउँछ ।
७. ग्रिन टी
एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वले भरपुर ग्रिन टीले सम्झना शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ । यसमा पोलिफिनोल तत्त्व पाइन्छ, जसले स्मरण शक्ति अझै बढाउँछ । दैनिक दुई कप ग्रिन टी नियमित सेवनले स्मरण शक्ति बढाउन निकै मत गर्छ ।
पालुङ्गोमा पोटासियम हुन्छ । यसले मस्तिष्कको कोशिकामा राम्रो सम्पर्क बनाउँछ । साथै सोच्ने तथा याद राख्ने शक्ति बढाउँछ । पालुङ्गोमा एन्टीअक्सिडेन्ट बाहेक म्याग्नेसियम, फोलेट, भिटामिन ‘ई’ तथा भिटामिन ‘के’ पाइन्छ, जसले डिमेन्सिया हुनबाट जोगाउँछ । पालुङ्गोले स्मरण क्षमता बढाउनुका साथै क्याल्सियमको समेत राम्रो स्रोत हो ।
बदाममा भिटामिन ३ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले मस्तिष्कमा फाइदा पु¥याउँछ साथै स्मरण क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।
अण्डा दिमागको स्वास्थ्यसँग जोडिएको धेरै पौष्टिक तत्त्वहरूको राम्रो स्रोत हो । अण्डामा भिटामिन बी, बी १२, फोलेट र कोलीन उपलब्ध हुन्छ । जसले मानसिक गिरावटलाई बचाउँछ । स्मरण शक्ति बलियो बनाउँछ । फालेट र भिटामिन बी १२ ले डिप्रेसनबाट बचाउँछ । फोलेटले डिमेन्सियाबाट बचाउँछ । भिटामिन बी र कोलीनले मस्तिष्कको विकासका सार्थ मुडलाई नियमित गर्न मदत गर्छ ।
११. फर्सीको बिउ
फर्सीको बिउमा तामा , फलाम, म्याग्नेसियम र जिङ्क पाइन्छ । जसमा धेरै सूक्ष्म पोषकतत्वहरू हुन्छन् जो मस्तिष्कको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
यस्तै विभिन्न खानाले तपाईँको दिमाग स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। केही खानाहरू, जस्तै फल र तरकारी, साथ साथै चिया र कफीमा एन्टिआक्सीडन्ट छ । जसले तपाईँको मस्तिष्कलाई क्षतिबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। नट र अण्डाहरूमा पोषण तत्त्व हुन्छन् जसले मेमोरी र मस्तिष्कको विकासलाई समर्थन गर्दछ। मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्न र सतर्कता, मेमोरी र मुडलाई बढवा दिन सकिन्छ । रणनीतिक रूपमा तपाईँको भोजनमा यी खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्नु जरुरी छ । (मकालु खबर बाट सभार)
च्याउ खानुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसका फाइदाहरु !!
तनाब व्यवस्थापन गर्ने यी आठ उपायहरु !!